Semalt: Ahoana no hanakanana ny tranokala iray amin'ny Chrome ao amin'ny Click Single
Indraindray, mety mila manamafy ny traikefanao amin'ny Internet ianao amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny navigateur web. Ohatra, ny ray aman-dreny dia mety maniry ny hametra ny ankizy tsy hiditra amin'ny vohikala votoatin'ny olon-dehibe. Amin'ny toe-javatra hafa, mety mila misoroka ny tranonkala iray manokana izay tsy mitsahatra mandritra ny fotoana voafaritra. Ity lahatsoratra SEO ity dia hampianatra anao ny fomba hanakanana ny tranokalan'ny Google Chrome. Azonao atao ny mifehy ny tranokala sy ny sehatra izay mety hahatezitra anao amin'ny fotoana rehetra ao amin'ny tranokalanao.
Nanazava io fitsipika io, fa i Igor Gamanenko, manam-pahaizana avy amin'ny Semalt , dia voafetra amin'ny navigateur Chrome, saingy afaka miasa ihany koa amin'ireo navigara hafa miaraka amin'ity fanitarana ity. Ankoatra izany, ny TemporarySite Blocker dia ny fanitarana ny tranokala amin'ny adihevitra.
Mba hanombohan'ity serivisy ity, mila manaraka dingana vitsivitsy vitsivitsy ianao. Aorian 'ny fanarahana ireo dingana ireo, dia tokony ho afaka hifehy ny tranokalan-tserasera ianao. Ity fomba fiasa ity dia afaka miasa amin'ny navigateur maro hafa mampiasa fampitomboana amin'ny tranokala hafa, afa-tsy izay mety ilainao hampiasana fomba hafa.
1. Midira ao amin'ny tranokala Chrome ianao, mandehana mankany amin'ny fikandrana ao amin'ny menu menu ary add TemporarySite Blocker. Araka ny voalaza etsy ambony, ity Addon ity dia ny fanitarana ny safidy.
2. Rehefa manomboka ny Blocker TemporarySite, dia misy ny icon manokana izay miseho eo an-tampony havanana amin'ny baikon'ny navigatoranao. Ity ny tontonana izay hampiasainao hifehy ny toetoetran'ity extension ity..
3. Rehefa tsindrio ity ity icon ity, dia mahazo miasa ianao tahaka ny bokotra iray. Afaka mamela na manala ny TemporarySite Blocker ianao. Azonao atao ny manisy tsindry ny bokotra hanakanana tranokala isaky ny miditra amin'ny rohy ianao.
4. Mba hanampiana tranonkala iray, azonao atao ny mankany amin'ny tranokala tianao hampidirina amin'ny lisitra blocklist. Ampidino na afeno ilay tranonkala amin'ity menio ity. Ny boutonan'ny TSB dia mijanona ao amin'ny tranokala chrome mba hampiasanao azy isaky ny misy toerana tokony hampidirinao ao amin'ny lisitry ny tranokala Chrome ao amin'ny tranokala.
Mba hitsapana ity fanitarana ity dia afeno fotsiny ny tranonkala manokana. Andramo ny hidiranao azy amin'ny fipihana ny rohy. Raha mahazo hafatra "voasakana" ianao ao amin'ny tranokalanao, dia miasa ny fanitarana. Ity rafitra ity dia mitohy mandra-pahatongan'ny andro izay hanapahanao hanakatona an'io tranonkala manokana io.
Fahendrena ihany koa ny manafina ny bokotra TSB amin'ny fijerena. Ity fepetra ity dia mety hanakana ny mpampiasa navigateur nosy tsy ahafahana manokatra ny tranonkala. Google Chrome ihany koa dia manana ny famerana amin'ny alalan'ny tenimiafin'ny tenimiafina. Azonao ampiasaina izany mba hanampiana fepetra fanampiny amin'ity safidy mifehy ity.
Indraindray, tena ilaina ny mifehy sy manara-maso ireo tranonkala izay mety hampiasain'ny mpampiasa navigateur. Raha toa ny olona sasany mampiasa izany mba hametra ny fampiasana ny aterineto amin'ny ankizy, ny hafa mety mila mametra ny fampiasany amin'ny tranonkalany mba hifehy ny traikefa azony. Ity torolalana SEO ity dia manana fampahalalana momba ny fomba hanakanana ireo tranokalan'ny Chrome amin'ny fampiasana ny TemporarySite Blocker. Azonao atao ny manazava sy manala ny tranonkala iray amin'ny alàlan'ny fanakanana izany ka mametra ny fampiasana ny solosainao. Io fomba fanao io dia azo ampiharina amin'ny navigateur hafa miaraka amin'ny fanitarana tranokala hafa toy izany Source .